အီတလီ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာလူစကိုနီ အနိုင်ရသော်လည်း အမတ်နေရာ တစ်ဝက်ေ? - Yangon Media Group
ရောမ၊ မတ် ၄
စီးပွားရေးနှေးကွေးနေမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း မြင့်မားနေမှုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများအရေး အကြိတ်အနယ် ဟောပြောမဲဆွယ် ပြီးသည့်နောက် အီတလီနိုင်ငံတွင် မတ်လ ၄ ရက်နေ့က ရွေးကောက် ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ သို့သော်မဲရလဒ် မပြတ်သားဘဲ နိုင်ငံရေးအကျပ် အတည်း ပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိ နေသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာလူစကိုနီနှင့် သူ၏လက်ယာစွန်း မဟာမိတ်ပါတီများသည် လွှတ်တော်တွင် အမတ်ဦးရေအများဆုံးရနိုင် သော်လည်း အမတ်နေရာ တစ်ဝက် ကျော်အနိုင်ရဖွယ်မရှိဟု စစ်တမ်းများက ခန့်မှန်းသည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကြီးထွားလာမှုအ ကြောင်း အလေးပေးဟောပြောကာ မဲဆွယ်ခဲ့သော 5-Star Movement ပါတီသည် အမတ်ဦးရေအများဆုံး အနိုင်ရသည့်ပါတီ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အာဏာရ လက်ဝဲယိမ်းဒီမိုကရက် တစ်ပါတီမှာမူ ရေပန်းစားမှုတွင် တတိယနေရာ၌သာ ရှိနေသည်။
”ရွေးကောက်ပွဲမယ်ဆွဲတဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ 5-Star ပါတီကိုထောက်ခံမှု ပိုအားကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ပါတီ၊ ဘယ်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကမှ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းရမယ်မထင်ဘူး”ဟု You Trend စစ်တမ်း အဖွဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Lorenzo က ပြောသည်။
အစိုးရကြွေူမြီအကျပ်အတည်း မြင့်မားချိန် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ဝန် ကြီးချုပ်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရ သော ဘာလူစကိုနီ (၈၁) နှစ်သည် ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ဦး ဆောင်ကာ နိုင်ငံရေးထဲ တစ်ကျော့ ပြန်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လိင်အရှုပ်တော်ပုံများ၊ ဥပဒေရေး ရာပြဿနာများ၊ ကျန်းမာရေးချို့ ယွင်းမှုတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘာလူစကိနီသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အခွန်မသမာမှု စီရင်ချက်တစ်ခုကြောင့် အစိုးရရာထူး ရယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ မိမိတို့ညွန့်ပေါင်း အဖွဲ့ အနိုင်ရပါက ဥရောပလွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌ အန်တိုနီယိုတာဂျာနီကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်မည်ဟု ၎င်းက ပြောဆိုထားသည်။
ဥရောပ ကားများကို သွင်းကုန် အခွန်ကောက်မည်ဟု ထရန့် ခြိမ်းခြောက်
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်အောင်မြင်ရန် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အားလုံး၏ ပုံစံကျနေသည့် ??